बामदेवले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावले सवै नेता कार्यकर्ता खुसि आखिर के छ त तेस्तो? पढेर मन परे सेयर गर्नुहोस!
काठमाडौं, साउन १३- : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वि,वाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव राख्नु भएको छ । नेकपाको वि,वादमा सदैव निर्णायक देखिनु भएका उहाले सबैलाई मान्य हुने गरी वि,वाद समाधानको ६ विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको हो ‘।
उहाले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल भरी केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र एकता महाधिवेशन नहुञ्जेल अध्यक्षमा पनि कायम रहने गरी सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।यसैगरी प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहन दिनुपर्ने समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मंसिर ४ गते पनि दुई अध्यक्षबीच यही विषयमा सहमति बनेको थियो । तर, प्रचण्ड सो सहमति नमान्ने बताउदै आउनु भएको छ’ ।
उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, बैठकहरु पार्टी कार्यालयमा संचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । उहाले प्रधानमन्त्रीका दिनदिनैका कामहरुमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने । तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ’।
यसैगरी, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको पदोन्नती र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।’उपाध्यक्ष गौतमले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ ।पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा सम्वैधानिक नियुक्ति गर्ने । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेत प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिनुपर्ने’ पनि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ’।